भलिबल खेलाडीको दसैँ : एनभीए विजेताको उत्सव, केहीको खल्लो « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 14 October, 2021 7:13 am
काठमाडौं । नेपालीको महान् चाड बडादसँै भित्रिसकेको छ । यतिबेला बडादसैंको हर्ष र उल्लास छाएको छ । आफ्ना इष्ट मित्र, घर परिवारबाट टाढा रहेकाहरूको एकै समयमा भेट हुने पर्वसमेत हो दसैं ।
महान् चाड दसैंबाट नेपाली खेलकुद क्षेत्र अक्षुतो रहने कुरै भएन । अझ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल त्यसबाट टाढा रहनै सक्दैन । ८ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट राष्ट्रिय खेल भलिबल घोषणा भएको हो ।
न्युज कारखानाले भलिबल खेलाडीको दसंै योजना कस्तो छ ? खेलाडीले कसरी दसैं मनाउँदै छन् ? कहाँ रहेर दसैं मनाउँदै छन् ? यस विषयमा राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खेलाडीसँग छोटो कुराकानी गरेको छ ।
न्युज कारखानाले राष्ट्रिय पुरुष भलिबल खेलाडी कुलबहादुर थापा (हरि), मानबहादुर श्रेष्ठ, राजेन्द्र बिष्ट, महिला खेलाडी प्रतिभा माली र उषा भण्डारीसँग दसैं योजनाबारे जिज्ञासा राखेको छ ।
दसैंमा त्यस्तो विशेष भनेर केही हुँदैन । घरमा पूजा गर्ने भोज खाने हुन्छ । घरपरिवारसँग टीका लगाउँछौँ । अघिल्लो सालको दसैँ परिवारमा जुठो परेर मनाएनौँ । यस पटकको दसैँमा अरुको भन्दा मेरो केही विशेष हुन्छ । किन भन्दा हामी टिमका खेलाडीले खेल खेलेर दसैँ मनाउँछौँ । बहिनी (न्यु डायमण्ड एकेडेमी खेलाडी)हरू पनि काठमाडौंमा हुन्छन् । घर नगएका बहिनीहरूसँग एकेडेमी पुगेर खेल्छौँ । एनभीए महिला च्याम्पियनसिप जितेपछि केही रमाइलो गर्ने योजना थियो । तर, दसैँले गर्दानै धेरै खेलाडी घर जाँदा त्यो रमाइलो भने छुटेको छ । घरबाट फर्केपछि त्यो रमाइलो पनि हुन्छ ।
रियल मड्रिड ओसासुनासँग बराबरीमा रोकियो
काठमाडौँ । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड ओसासुनासँग बराबरीमा रोकिएको छ । बुधबार राति भएको खेलमा
राष्ट्रिय महिला क्रिकेट खेलाडी छनोट, काे काे परे टाेलीमा ?
काठमाडौं । रुबिना क्षेत्रीको कप्तानीमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको